Xildhibaanno ka difaacay Madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sh. Axmed warbixin dhaliileysay – Kalfadhi
March 11, 2019 Kalfadhi
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi, oo ka tirsan Golaha Shacabka, ayaa u fasiray gaf ka dhan ah hogaankii hore ee dalka in, sida uu hadalka u dhigay, iyada oo ay joogaan madax hadda hogaamisa Soomaaliya oo, sida uu sheegay, ay kala duwan yihiin hadalkooda iyo ficilkooda lagu mashquulo wax ay sameeyeen kuwa hore, oo aan hadda ummadda xil u hayan.
Waxa uu Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Shariif Sh. Axmed, ka difaacay sheeko laga sameeyey, oo codadkiisa oo muuqaal wata uu wariyuhu ku muujinayo in, isaga oo Maxkamadihii Islaamiga ahaa hogaaminaya, maruu Madaxweyne ahaa iyo isaga oo u sharraxan xilkaas, uu yiri hadalo isburinaya.
“Sheekh Shariif waa soo wada shaqaynay, wanaag badan ayuu soo qabtey, mana mudno in waxqabadkiisii aflagaado abaabulan oo kuwa cuqdadaysan ay ka danbeeyaan loogu bedelo” ayuu Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ku yiri dhigaal uu ku soo daabacay boggiisa.
“Kuwo wajiyo-badan, kala carrab duwan, kala midabyo ah oo hadaladooda iyo ficiladoodu ay kala duwan tahay, ayaa madax hore ku eedaynaya waxa ay ayagu ku tilaaman yihiin” ayuu Xildhibaanku yiri ka hor inta uusan qorin sadarada uu ku difaacayo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Shariif Sh. Axmed.
Xildhibaan Fiqi waxa uu baahintaas ku tilmaamay in ay hayd aflagaaddo abaabulan, oo ay sameeyeen dad uu sheegay in ay fashilmeen, sida uu hadalka u dhigay. “Cayda iyo aflagaadadu waxey waayadii danbe aheyd mehradda qolo fashilantay iyo shakhsiyaad biyaha cakiran hoostooda ka dhex-ugaarsanaya” ayuu fiqi ku yiri dhigaalkiisa.
Waa Xildhibaankii labaad oo baahintaas ka difaacaya Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Shariif Sh. SAxmed. Maalin ka hor, waxaa sidaas oo kale ka difaacay Xildhibaan Ilyaas Cali Xasan, oo ka tirsan Golaha Aqalka Sare, kana mid ah Xisbiga Shariif Sh. Axmed ee Himilo Qaran.
“In Madaxdii hore oo dalka wanaaga yar ee aan maanta heysano sababta u aheyd la caayo yey dani ugu jirtaa” su’aal ahayd ayuu Xildhibaan Ilyaas ku soo daabacay Feysbuuggiisa. “Lacagta, xooga, waqtiga iyo maskaxda la gelinayo soo majiraan meelo kaloo ay mudantahay in lagu bixyo” su’aal kaloo ahayd ayuu Xildhibaanku uga faalooday baahintaas.
Xildhibaanno qaba iney Soomaaliya haysato ciidan AMISOM bedeli kara balse ka walaacsan tayadooda